Wikitongues: Raketo An-tahiry Ny Tenim-pirenenao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2014 18:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Català, Español, Italiano, Aymara, Deutsch, polski, عربي, English
Wikitongues dia tetikasa vaovao mikendry handrakitra an-tahiry ireo tenim-pirenena 7000 manerana izao tontolo izao.
Ahitana ilay antsoina mahazatra hoe “vitsy an'isa” tahaka ny K'iche (Quiché), zana-bondron'ny teny Maya, avy ao Goatemala ihany koa ireo lahatsary. Na dia izany aza, malina kokoa ny vondrona ka tsy mijery ny maha-maro an'isa na vitsy an'isa ny teny ao amin'ny habaka, fa mampifandanja tsara ireo karazana fiteny manokana na firy na firy ny fitambaran'ny isan'ireo mpandray fitenena manerantany.
Misafidy “Tenim-pirenen'ny herinandro” ihany koa ny Wikitongues ao amin'ny bilaogy Tumblr azy ireo, ahitana ireo rohy sy vaovao momba ny teny tsirairay avy. Ny teny Basque ohatra no nosafidiana farany teo.
Azonao arahina ao amin'ny Instagram sy Twitter ny tetikasa – midira aterineto raha hizara ny lahatsarinao manokana .